Idlalwa kanjani iSuper Mario 64 mahhala kwi-iPhone yethu ne-iPad | Izindaba ze-IPhone
Idlalwa kanjani iSuper Mario 64 mahhala ku-iPhone ne-iPad yethu
Ngokungafani ne-Android, ama-emulators ayisihloko se-Taboo ku-Apple. I-Emulator efinyelela ku-App Store ngendlela yolunye uhlelo lokusebenza, i-emulator egcina ishiya esitolo. Ngenxa yemikhawulo ye-App Store, okuwukuphela kwendlela noma ngubani ofuna ukunikeza insiza ku-iOS athola ngaphandle kokuhlola izihlungi ze-App Store ukusebenzisa isiphequluli.
xCloud, Amazon Luna, Google Stadia ngezinye izibonelo. Kulaba, kufanele sengeze lokho esikuthembayo, ukuthambekela, futhi kungenzeka ukuthi sidlale imidlalo yama-classic yama-classic ngqo kusuka ku-iPhone yethu noma i-iPad ngeSafari. Okwamanje, kuze kufike lapho uNintendo esho okuhlukile, kufanele sixazulule ukudlala iSuper Mario 64 mahhala ku-iPhone noma kwi-iPad yethu ngalesi sixhumanisi.
Ngokwabafana be Nintendo Life, singadlala i-Super Mario 64 yesithonjana kunoma iyiphi idivayisi, uhlelo lokusebenza alunandaba, ngoba sisebenzisa isiphequluli. Lokhu kungenzeka ngenxa yephrojekthi yeGitHub ebizwa nge- "Super Mario 64 decomp project".
Umdlalo udlala ngokushesha futhi ngaphandle kokulahla kunoma iyiphi i-iPhone, i-iPad, ngisho ne-Mac noma i-Windows PC. Okwamanje, njengoba ngishilo ngenhla, asazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi uNintendo abhubhise le emulator, kepha ngenkathi itholakala, kufanele siyisebenzise.
Izindaba zokuqala ngale webhusayithi esivumela ukuthi sidlale iSuper Mario 64 zivela ngo-Ephreli, ngakho-ke konke kubonakala kukukhombisa lokho Imizamo kaNintendo yokudiliza leli khasi iwebhu ayiphumelelanga.
Ukuze ujabulele lo mdlalo ku-iPhone yakho noma i-iPad, udinga ukubhangqa isilawuli se-PlayStation, i-Xbox noma i-MFI, abalawuli abahambisana ne-Safari. Le webhusayithi isivumela ukuthi songe inqubekela phambili yemidlalo, yize kungacaciswanga ukuthi yenzaphi, mhlawumbe kunqolobane yesiphequluli.
Uma ufuna ukudlala kwi-PC noma kwi-Mac, ungakwenza usebenzisa ikhibhodi. Phezulu ekhasini lewebhu, ngaphambi kokulayisha umdlalo, uzosikhombisa umhlahlandlela wezinkinobho esingazisebenzisa. Ngokusebenza ngesiphequluli, uma une-Xbox, ungadlala kwikhonsoli ye-Microsoft ngesiphequluli se-Edge usebenzisa irimothi njengoba sibona kuvidiyo elandelayo.
Unganginaki. Ukudlala nje iSuper Mario 64 ku-Xbox Series X yami. pic.twitter.com/ak57JVEBOr
- UDaniel Hollis (@DanielAJHollis) August 20, 2021
Dlala iNintendo Mario kukhonsoli yeMicrosoft… ISuper Mario 64 yaqala ukukhishwa ngo-1996 yiNintendo 64 futhi kusukela lapho, iphinde yakhishwa kabili:
Ngo-2004 ngeNintendo DS
Ngo-2020 weNintendo Swith
Ngithe, uma ufuna ukujabulela lesi sihloko futhi, ungaphuzi ukukwenza hleze umshini kaNintendo osemthethweni wenze umsebenzi wawo ngaphambi kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » Imidlalo ye-IPhone » Idlalwa kanjani iSuper Mario 64 mahhala ku-iPhone ne-iPad yethu
Udokotela waseSan Francisco ubekwe icala lokutholakala nezithombe zocansi zezingane ku-iCloud